निलम्बित अपराधी गोकमान त्यानिसले सम्भवतः पारिवारिक नाटकलाई पक्राउ गरे: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	18 मार्च 2019 मा	• 36 टिप्पणिहरु
त्यसैले तपाईं सबै माध्यमहरू छन्, तपाईं सँगै सबै शहरहरू फाँटिरहेका क्यामेराहरू छन्, सबैले स्वचालित रूपमा बचत गर्न सक्छन्, तपाइँसँग अनुमानजनक ठूलो डेटा विश्लेषण प्रणाली छन्, तर तपाईं सार्वजनिक यातायात हड्ताल दिनको मौकामा हुने आक्रमणको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्न? त्यसपछि तपाइँ यो सम्पूर्ण कथालाई मिडियामा आतंकवादको कार्यमा उडाउनुहुन्छ र अचानक सन्देशहरू पप अप गर्न सक्छ कि यो सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा एक निपटान बारे हुन सक्छ। NOS रिपोर्टहरू [उद्धरण गर्नुहोस्] दिन को समयमा, बयान मानिस को परिचितों देखि बनाइयो, र भन्यो कि उनको मनोवैज्ञानिक समस्या थियो र एक परिवार को मुद्दा थियो। केही अनुसार, संदिग्धले आफ्नो पूर्व प्रत्याशित गरेको थियो, अरूले सोधे कि उनको लक्ष्य उनको सन्यादको सदस्य थियो।
मेरी राय मा, हामीले केवल एक राम्रो तरिकाले तैयार PsyOp संग सबै आतंक उपायहरु को परीक्षण र मान्छे को प्रतिक्रिया को उपाय गर्न को लागी निपटने थियो। हामीले सडकमा पुलिसको सेना देखेका छौं जसको सडकमा तपाईले सम्पूर्ण देश लिन सक्नुहुनेछ! यसको अतिरिक्त, यो केहि नयाँ, अर्थात् एक छुटेको परिचय सोशल मिडिया सेंसरशिप परिचय गर्न एक राम्रो तरिका थियो। यो तथ्य पत्ता लगाउन सकिन्छ कि पुलिसले सूचनाहरू सोशल मिडियामा अपलोड गर्नु हुँदैन, तर केवल उनीहरूको वेबसाइटमार्फत। यो वास्तविकताको विश्वव्यापी परिचय न्यूजील्याण्डमा आक्रमणको समयमा भएको थियो, जस्तै वर्णन मा यो लेख। एक वेबसाइट पनि प्रस्तुत गरिएको थियो जहाँ तपाइँ प्रतिवेदन सुरक्षित हुनुहुन्छ (ikbenveilig.nl ठूलो डाटा प्रणालीको लागि राम्रो)। यस बीच, विभिन्न आतंक खतराको स्तरको प्रभाव राम्रो तरिकाले मापन गर्न सकिन्छ। यस तरिकाले मान्छे बिस्तारै 'घेराबन्दीको अवस्था' मा प्रयोग गर्न सक्दछ र यो उपाय गर्न सम्भव छ कि नागरिकहरू कति राम्रो छन् भित्र बस्नुहोस् कोड5मा।
प्रहरीले अभियोगको दुर्व्यवहारमा डनरको साथमा आक्रमण गरेको थियो। त्यो पनि नयाँ औषधिको आगमन हो जुन हामीले पहिले नै प्रयोग गर्न सक्दछौं। मान्छे भारी मात्रामा सशस्त्र मुखौटा अधिकारीहरूको तस्बिरहरूको आनन्द उठाउन सक्षम थिए र यसैले 1 दिन सबै पुलिस स्टेट उपाधिहरू राम्ररी परीक्षण भए। हामी कहिलेकाहीँ सडकमा टैंकको परिचयको आशा गर्न सक्छौं? अह, यसको लागि हामी अझ बढी र भारी हथियारको साथ अधिक (नकली) आतंक चाहिन्छ!
यसकारण यो कथा शायद चाँडै पारिवारिक नाटकमा घटाउन सकिन्छ। यस बीच, सबै प्रणालीहरू 1 दिनमा राम्रो तरिकाले परीक्षण गरिएको छ र महिलाहरु र सज्जनहरू बहाना लिएर बसिरहेका छन् कि त्यहाँ मात्र उच्च स्टेजहरू छन्। तपाईं बस "आतंकवादी विशेषज्ञ" लाई बोलाउन सक्नुहुन्छ कि उनीहरूलाई भन्न चाहानुहुन्छ कि एकले अर्कोलाई बहिष्कृत गर्दैन र जाजावादीहरूले लागूपदार्थको प्रयोग वा सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा समस्याहरूको परिणामको रूपमा आतंकमा जान सक्छ। त्यस्ता जवान केटीले भन्यो एनओएस समाचार क्षेत्रको कोर्सको अनुभव गरौं। र त्यसो भए सबैले एक पीडा गरे र सम्पूर्ण कुरा अगाडी बढ्यो।
गीस्स्जिल्ले रिपोर्ट गर्न सकेको थियो कि Gökmen ट्यानिस हुन सक्छ कष्टप्रद मोरक्को यो चलचित्र यसलाई पनि चिकन बनाउनुहोस्। कसलाई थाहा छ, तर कसले मलाई बताउँछ कि पहिले नै कार्यान्वयन गरिएको थिएन? कुनै पनि मामला मा, तपाईं निश्चित रूप देखि सोचना चाहिए कि सरकार आफैले त्यहि मामलाहरु लाई तैनात गर्दै छन्। त्यो मात्र सम्भव छैन; त्यो असंभव छ। त्यो सोचाइको योजना हो र त्यो पनि प्रतिबन्ध लगाइएको हुनुपर्छ।
मृत र घाइतेहरू सँधै वास्तविक छन्। आखिर, हामी वास्तविक तस्बिरहरू र वास्तविक साक्षीहरू र वास्तविक नातेदारहरू देख्छौं। हामी विश्वास गर्दैनौं कि सरकारहरू र प्राधिकरणहरू मजाको लागि यस्तो कुरा गर्छन। होइन, उनीहरूले मजाको लागि पनि गर्दैनन्; उनीहरूले पुलिस राज्यलाई लागू गर्न जारी राख्न सक्षम छन्। के तपाइँ बुझ्नुहुन्छ? "हो, तर तपाईं नक्कली र घाइते नकली गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?"यदि तपाईले एनएनएनएक्सएमक्स व्यक्तिहरूलाई विद्रोह गर्ने बिना एकतावादी पुलिस राज्य अन्तर्गत ल्याउन सक्नुहुन्छ?" किन होइन? तल भिडियोमा एक नजर लिनुहोस् र सोच्नुहोस् के बारे मा सोच्नुहोस् जब तपाईं अभिनेता संग काम गर्नुहुन्छ, गहिरो नकली en greenscreen प्रविधिहरू। यदि तपाईं मिडियाको ध्यानको ओभरकिटलको साथ र झूट दोहोर्याउनु भएको छ भने, सबैले स्वचालित रूपमा यसलाई विश्वास गर्नेछ (प्रतिलिपि अधिकार जोसेफ गोबिबल्स)।
के यो हेर्न मनपर्ने थिएन कि मिडिया क्यामेराहरूले कसरी सारा मनीच धेरै धेरै पछ्याउन सक्छ? यो जस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू कहाँ जान्थे र उनीहरु कहाँ पुग्थे। ओह राम्रो छ। राम्रो सुत्नुहोस्। आँखाहरू बन्द र बन्द हुन्छन्। बुबा तिमी राम्ररी देख्दैछौ।
यस लेख र यो टिप्पणीको अधीन टिप्पणीहरू नबिर्सनुहोस् अघिल्लो लेख पढ्न। र यद्यपि मतदान गरिरहनुहोस्! पढ्नुहोस् यहाँ किन!
स्रोत लिङ्क सूची: nos.nl, telegraaf.nl
ट्याग: 24 oktoberplein, पक्राउ, पक्राउ, पक्राउ, परिवार नाटक, विशेष, पक्राउ, Gökmen Tanis, jihadist, Jihadists, युट्रेच्ट
Rowald Krijthe लेखे:
18 मार्च 2019 मा 21: 00
र ov 66 मिनेट ......
18 मार्च 2019 मा 21: 27
NOS द्वारा प्रस्तुत गवाही दानियल मोलनेरले एक रोचक अध्ययन गरे:
18 मार्च 2019 मा 21: 35
युट्रेच विश्वविद्यालय यस मनोचिकित्सक मा एक धेरै खराब भूमिका निभािन्छ, म दृष्टि ट्यूब बच्चाहरु को लागि प्रोग्रामिंग मा डे Graaf vnv को धोखा को बारे मा उत्सुक हूँ .. Pauw र जेनेक बस मा आउछ
18 मार्च 2019 मा 21: 43
यसैले बिट्रिस डे ग्रेफ जीडीआर मामिलामा विशेषज्ञ रहेको छ। त्यसैले त्यो जीडीआरमा इन्फिनिजिएलर मित्तैब्रेटर प्रणालीको बारेमा धेरै थाहा छ। यसैले मैडम ले यो गवाह दानियल मिलर को प्रशिक्षित गरेको छ!
2004 मा उनले उसलाई पीएचडी को बारे मा यूटीआर को शोध प्रबंध संग यूट्रेट विश्वविद्यालय मा प्राप्त गरे
18 मार्च 2019 मा 21: 50
निस्सन्देह तपाईं क्लबको सदस्य हुनुहुन्छ अन्यथा तपाई त्यो स्थिति प्राप्त गर्नुहुन्न। हो, यो सामान्यतया संदिग्ध भूमिहरूमा काम गर्दछ, साधारण मानिसहरूको शत्रुले कुलीन द्वारा संचालित। खतरनाक व्यक्ति। अनि यस बीच धेरै शान्त र नियन्त्रित।
18 मार्च 2019 मा 21: 56
त्यहाँ पनि छ ... त्यसैले सबै सँगै जोड्नुहोस्। र हेर्नुहोस् जुन एडी सबै AIVD र MIVD मा रिपोर्टिंग गर्दछ
रणनीतिक विषयवस्तुहरू / फोकस क्षेत्रहरू
संस्थाहरूको ओपन सोसायटी (सामरिक विषय)
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास
आतंकवाद र राजनीतिक हिंसा
अनुसन्धान परियोजनाहरू (चयन)
TerInfo। क्लासरूममा छलफल गर्ने आतंकवाद (2017-)
युरोप सुरक्षित, यसको दुश्मन लड्न। यूरोप र त्यसमा एक सुरक्षा संस्कृति बनाउने (ईआरसी कन्सोनेटर अनुदान, 2014-2019)
आशाको ब्लुप्रिन्ट (NWO नि: शुल्क प्रतिस्पर्धा, 2016-2021)
राज्यको दुश्मन। एक राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य बनाउन, 1945-2000 (NWO VIDI, 2009-2014)
ट्रायलमा परीक्षण (एनआईएएस अनुसन्धान समूह, 2010-2011)
18 मार्च 2019 मा 22: 29
यो पनि दिलचस्प छ कि 20: 00 घण्टा एनओएस न्यूज ("एक्सएनएक्सएक्स: 10 मिनेट") बाट "आतंकवाद विशेषज्ञ" भनिन्छ जुन जीनियन डी राय वान ज्यूज्द्विजेन भनिन्छ। हामी सबै विशिष्ट नामहरू देख्छौ ...
संवेदना एड एड डी डी रजदीवेज को एक बहिनी?
18 मार्च 2019 मा 22: 38
मैले पहिलो प्रेरणाको रूपमा सोचेको छ
18 मार्च 2019 मा 22: 52
यो एक सानो क्लब हो जुन बहुमतको लागि कम चलिरहेको छ, मिनर्व्रा, इन्टिट्युट क्लिन्न्डेलेल (क्लाइइटुर मार्फत ब्याडनेट जडान)।
हामी दोहोरिन्छौं ...
18 मार्च 2019 मा 21: 46
निस्सन्देह भविष्यका जासूसहरूको लागि राम्रो शिक्षा, ट्रेल र स्पक्स। त्यो मिलन पनि राम्रो र हेरविचार देखिन्छ। मानिसहरु लाई राम्रो तरिकाले पैक गर्दछ। आदर्श जासूस सामग्री। सांस्कृतिक आदानप्रदानको लागि उत्तर कोरियामा पठाउनुहोस्
एक यात्रा कार्यक्रम पनि राम्रो काम गर्दछ, तथाकथित 'यात्रा' भनिन्छ।
18 मार्च 2019 मा 21: 33
र यो कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ?
18 मार्च 2019 मा 21: 52
त्रुटि धन्यवाद! उनीहरूले भन्थे वा माफ गर्दछन् यो पनि राम्रो हुन्छ।
18 मार्च 2019 मा 21: 18
"यूट्रेटमा शूटिंग पछि, मानिसहरूले फेसबुकमा रिपोर्ट गर्न सक्छन् कि उनी सुरक्षित छन्। सेवाले एक तथाकथित सुरक्षा जाँच खोलेको छ। नीदरल्याण्डमा यो पहिलो पटक हो जुन यो नीदरल्याण्डमा एक घटनाको लागि भयो।
यदि आपदा हुन्छ भने, फेसबुकले कुनै व्यक्तिलाई विशेष सन्देश पठाउने निर्णय गर्न सक्छ जुन आपदा क्षेत्रमा हुन सक्छ। त्यसपछि प्रयोगकर्ताहरू 'I am safe' बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एक अधिसूचना स्वचालित रूपमा ती प्रयोगकर्ताहरूको सबै साथीहरूलाई पठाइएको छ।
फेसबुक सुरक्षा जाँच पहिले लन्डन, मैनचेस्टर, ब्रसेल्स, बर्लिन, पेरिस, म्यूनिख, नाइस, टर्की र लास वेगास र जंगल आग, टाइफून र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक आपदाहरूको लागि नरसंहारका लागि प्रयोग गरिएको थियो। "
छोटोमा: ठूला डेटा प्रणालीमाथि भरोसा राख्नुहोस् र राज्यमाथि भरोसा राख्नुहोस्: छिटो रिपोर्ट गर्नुहोस् कि बुबालाई तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ। निस्सन्देह, यो सबै डाटा कुनै अन्य चीजको लागि प्रयोग गरिएको छैन। यो केवल सजिलो छ।
म ईमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दछ कि म बुझ्दैनौं कि कसैले कुनै पुलिस अधिकारी, एक सैनिक, आदिको चाहना गर्दैन। के तिनीहरूसँग कुनै स्वतन्त्र, सोच सफा गर्ने क्षमता छैन? तिनीहरू सोच्दैनन् कि उनि एक पागल घर मा खेल रहे हो र उनको मालिक वास्तव मा पागल हो। होइन, उनीसँग वास्तवमा त्यो क्षमता छैन। यसमा उनीहरूले पुलिस, सिपाही आदि खेलिरहेका छन्। तिनीहरू वर्दीको हेरचाह गर्छन र उनीहरूको ख्याल राख्दैनन् कि रेमेमले उनीहरूको कायम राख्छन्। शब्द शासनको लागि माफ गर्नुहोस् मार्टिन।
सिभिल सेवकहरू तपाईंको पहिचान तपाईंको वर्दीको साथमा पर्याय छैन। सौभाग्य देखि तर अन्यथा तपाईं एक वर्दी को बिना केहि कल्पना नहीं गर्नेछन्। हामी हुन सक्दैनौं, निस्सन्देह, त्यो छ। मदुरामाम सुरक्षित राख्न धन्यवाद।
18 मार्च 2019 मा 21: 37
कुनै पनि मामला मा, उनि अब एक वास्तविक व्यायाम पकडने मा सक्षम भएको छ ... कि 8 र9नोभेम्बर को सिर्फ मूंगफली थियो
18 मार्च 2019 मा 22: 10
साथै Vervoersmaatschappy क्रियोलिज मा यो थाहा थियो आज को लागि के भएको थियो। यो पछि क्रेभोलिसद्वारा सफा गरिएको छ
दुर्भाग्यवश म फोटो यहाँ पोस्ट गर्न सक्दिन।
मार्टिन व्रिजल्याण्ड द्वारा सधैं अनुरोध मा उपलब्ध छ
18 मार्च 2019 मा 22: 13
@ डिब्बाबंद सामन, नेदरल्याण्ड्सका पत्रकारहरू निश्चित रूपमा मुख्य सम्पादकहरू सीधा काम गर्दछ र सुरक्षा सेवाको दिशामा। तिनीहरूसँग एकअर्काको व्यक्तिगत नम्बर छ र पक्कै क्लबको सदस्य छन्।
त्यो पनि धेरै 'प्रसिद्ध' लेखकहरूमा लागू हुन्छ। लेखन एक आवरण हो। गन्दा, गोपनीय व्यक्तिहरू।
18 मार्च 2019 मा 22: 57
सडकमा थप पुलिसहरू छैनन्। जङ्क, असुरक्षा आदि।
जाहिराले यी प्रकारका एकाइहरूमा जान्छ।
@ zon ... हामी लगभग सबै साथ साथ खेल्छौं। हामी सबै यसलाई सुरक्षित राख्छौं।
18 मार्च 2019 मा 23: 35
आह निइसेउपेउरले भने कि रातो रेनल्टमा एक टिप्पणी पनि फेला पर्यो। त्यसैले यो पासपोर्ट कुनै समय छैन, तर एउटा टिप्पणी।
उसले के लेखेको छ? एक प्रकारको विदाई पत्र?
18 मार्च 2019 मा 23: 45
यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईदिनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ? nl
18 मार्च 2019 मा 23: 48
र अर्को मानिस? "हो, उहाँले भर्खरै उनको सास ब्लाउनुभयो"
तपाईं AIVD अभिनय स्कूल मा यति धेरै रमाइलो ठिक हुन सिक्न?
11: 25 मिनेट गहने निकवी वाइन गिन्सेन
18 मार्च 2019 मा 23: 57
19 मार्च 2019 मा 11: 38
यो जवान मान्छे साँच्चै ठुलो छ। मलाई लाग्छ केहि थोरै परिस्थितिमा भएको थियो।
19 मार्च 2019 मा 10: 27
19 मार्च 2019 मा 10: 47
जजा डे इमो ब्वाइलिङ्ग अब कथा बनाउन योग्य ओभरडाइभमा जान्छ। यो मिडिया हो, त्यसैले मिडियाले यसलाई ल्याउन सक्छ र आफन्तहरूको तस्बिरहरू देखाउन सक्छ र सम्पूर्ण कथा सिर्जना गर्न र सँधै राख्न सक्छ।
19 मार्च 2019 मा 11: 03
म तपाईंको लागि एउटा 1 प्रश्न मार्टिन,
फुटबल कोच जस्तै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ?
किनकि उसले त्यहाँ प्रशिक्षित गरेको हुनुपर्छ र मान्छेले उहाँलाई चिन्नु पर्दछ, मलाई लाग्छ।
अथवा यो एक काल्पनिक व्यक्ति हो?
19 मार्च 2019 मा 11: 18
एक वास्तविक व्यक्ति हुन सक्छ (Waikiki आइल्याण्डमा एक-तरको टिकट), तर यो पनि वास्तविक हुन सक्दैन। हामी टिभीमा भेट्टाउने नातेदार र साक्षी टिभीमा देखाइन्छ। वा त: सञ्जाल कथामा अग्रणी छन् र उनीहरूले सबै कुरालाई तोड्न र सबैलाई तोड्न सक्छन्। सोशल मिडिया सेना मामलाको रक्षा गर्न तयार छ।
19 मार्च 2019 मा 11: 43
ठीक छ र तपाईंको उत्तरको लागि धन्यबाद।
म (मानसिक रूपमा अस्थिर) संदिग्ध स्थितिको बारेमा धेरै उत्सुक हुनुहुन्छ। के हो त्यो शूटर एक दृश्य मा पहिले कि योजना भएको थियो? यदि त्यसो भए, उनीहरूले उनलाई कसरी प्राप्त गरे? के उहाँले आफ्नो टाउकोमा आवाज सुन्नुभयो? केवल एक विचार। कुनै पनि मामला, यस मनोवैज्ञानिक संचालन मा जो पनि स्थिति हो, त्यो नामित अक्षर थियो जसलाई उनि "हमला" को लागि अंततः पुलिस राज्य को माध्यम ले कानून को माध्यम ले रोल को आवश्यकता हो।
19 मार्च 2019 मा 11: 36
तपाईं मानिसहरूलाई जो तुरुन्तै लागूपदार्थ वा औषधि चाहिन्छ, पागल चीजहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी यकिन छैन कि यो यो मामला हो कि छैन।
19 मार्च 2019 मा 12: 32
उदाहरणको लागि, अहिले कुनै एक आतंकवादी कार्य गर्न दूरीमा कसैलाई मनन गर्न उन्नत प्रविधिहरू छन्। र त्यो तिनीहरू निश्चित छन् कि यो पनि एक कार्य मा परिणाम हुनेछ कि तिनीहरूलाई लाभ हुनेछ भनेर थाहा छ। निस्सन्देह यो मनोवैज्ञानिक समस्याहरु संग एक व्यक्ति को पीडित गर्न को लागी आसान छ।
19 मार्च 2019 मा 11: 42
तिनीहरू कसरी आतंकको साथ आउँछन्?
19 मार्च 2019 मा 11: 50
19 मार्च 2019 मा 12: 15
त्यसोभए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। एक 'राम्रो' वकील निश्चित रूप देखि, खांसी को ठेगाना हुनेछ। अनि निस्सन्देह जनसंख्यालाई प्रभाव पार्ने। याद गर्नुहोस् कि भोलि पनि चुनाव हुनेछ। मलाई आश्चर्य छ कि यदि धेरै विचारधाराहरू हुनेछ वा यसको विपरीत?
19 मार्च 2019 मा 12: 39
हामी शहीद अदालतहरू भन्दा पहिले जिहादवादीहरू कोसिस गर्न चाहन्छन्!
आपराधिक कानून [सम्पादन गर्नुहोस्]
इस्लाममा, आपराधिक विधि प्रकृति मा निजी रूपमा निजी छ। उदाहरणका लागि, मौतलाई मृत्युदण्डको सजाय दिईएको छ, तर शिकारको जीवित रिश्तेदारहरूले निर्णय लिन्छन् कि यो सजाय साँच्चै माग गरेको छ वा चाहे रिश्वतसँग बसेको छ। पार्टीको बीचमा वार्ता गरेर त्यस रकमको रकम निर्धारण गरिन्छ। रक्तघाती वा सम्मान हत्यालाई निषेधित गरिएको छ।
19 मार्च 2019 मा 13: 51
RTL मा6घण्टा समाचारको बारेमा मैले धेरै हेरेको कुरा थियो कि यूट्रेटमा मस्जिदलाई धेरै ध्यान दिइयो। यो तुरुन्तै बन्द हुनेछ जब घोषणा गरिएको थियो कि शूटिङ चलिरहेको थियो। ब्लबला मस्जिदको प्रबन्धकसँग साक्षात्कार। तपाईलाई कर्जाको मतलब के हो? जनसंख्याको दिमागमा राम्ररी प्रतिक्रियाको जवाफले न्यूजील्याण्डमा शूटिंगसँग लिङ्क बनाउँछ। यससँग एकअर्कासँग कुनै सामान्य आधार छैन, तर यसको बावजूद मानिसहरूको दिमागमा प्रतिक्रिया गर्ने प्रयास। किन तपाईं फेरि एक मस्जिद बन्द गर्नु पर्छ किनकि त्यहाँ शहरमा अन्य ठाउँको शूटिंग हो? लिङ्क अझै पनि अर्थ बनाउँछ। कस्तो बिरामीको संसार
« आतंकवादी आक्रमण 24 Oktoberplein यूट्रेट मा, देश भर मा आतंक!
यूट्रिटमा आक्रमणको मृत निश्चित रूप देखि प्रमाणित छ कि यो एक PsyOp हुन सक्दैन? »
कुल भ्रमण: 11.613.117